ဗမာအစိုးရ။ရခိုင်။မဘသတို့သွားနေသည့်ဖက်စစ် စနစ် နာဇီဝါဒ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« မြို့တော်ခန်းမရှေ့ နိုင်ငံတော် အကြမ်းဖက်မှုကို ဖေါ်ထုတ်ခြင်း
#‎Myanmar‬ misusing ‪#‎RedCross‬ in its violent operations ဆန္ဒပြတာကိုဖြိုခွဲတဲ့နေရာမှာ ကြက်ခြေနီတွေကို စွမ်းအားရှင်အဖြစ်အသုံးပြုတာမြင်ရတော့ – ဒီပဲရင်းကွပ်မျက်မှု ကို သတိရမိတယ် »
ဗမာအစိုးရ။ရခိုင်။မဘသတို့သွားနေသည့်ဖက်စစ် စနစ် နာဇီဝါဒ
Solonight Emparor : ဗမာအစိုးရ။ရခိုင်။မဘသတို့သွားနေသည့်နာဇီဝါဒ.
နာဇီ ပါတီ၏ ၀ါဒဖြန့်ချီရေး ယန္တယားသည် ဟစ်တလာ အာဏာမရခင် နှင့် ရပြီးကာလများ (၁၉၃၃-၁၉၄၅) အတွင်း အရှိန်အဟုန် နှင့် လည်ပါတ်ခဲ့သည်။ ၁၉၁၉ တွင် တဖက်သတ် ချုပ်ဆိုခံခဲ့ရသော ဗာဆေးစာချုပ်ကြောင့် စိတ်ဓါတ်ယို့ယွင်းလာနေသော ဂျာမာန် လူထုအတွက် စစ်သွေးကြွ အမျိုးသားရေးဝါဒ ကို စတင်ဝါဒဖြန့် သွတ်သွင်းခဲ့ကြသည်။
အောက်ဖေါ်ပြပါ စာတမ်းသည် ၁၉၂၅-၂၆ တွင် ဟစ်တလာကိုယ်တိုင် ရေးသားခဲ့သော မိန်းကမ့် (Mein Kampf) မှ ၀ါဒဖြန့်ချီရေးနှင့် ပါတ်သက်သော အကြောင်းအရာ ဖြစ်ပြီး နာဇီ အုပ်ချုပ်ရေး ကာလတလျောက်လုံး လက်စွဲ အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
“၀ါဒဖြန့်ချီရေးသည် ကျယ်ပြန်သော လူထုလူတန်းစား အလွှာအသီးသီးကို ဦးတည် ဆွဲဆောင်နိူင်ရမည်။
လူကြိုက်များနိူင်မည့် အသွင်ဖန်တီးနိူင်ရမည်ဖြစ်ပြီး မိမိရည်ရွယ်သော လူတန်းစား၏ နားလည်နိူင်သော ပညာညဏ်အတိုင်းအတာကို အထူးသတိပြု ရပေမည်။
၎င်းတို့၏ စိတ်ခံစားမှုကို ဆွဲဆောင်နိူင်ရန်လိုပြီး ၀ါဒဖြန့်ချီရေး သဘောတရားကို မျက်ခြေမပြတ်ပဲ လူထု၏ စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကို နှိုးဆွနိူင်ရမည်။
၎င်းတို့၏ နှလုံးသားကို ဆွဲကိုင်လှုပ်ရမ်းနိူင်မည့် အခြင်းအရာကို စိတ်ပညာ ရှု့ဒေါင့်မှ ရှာဖွေနိူင်ရမည်။
မိမိတို့ ပြစ်မှတ်ထားသော လူတန်းစားများမှာ သံတမာန်များ၊ ပါမောက္ခများ၊ အကျိုးအကြောင်း ဆီလျော်စွာ တွေးခေါ်နိူင်စွမ်းရှိသော သူများ ပါဝင်မည်မဟုတ်၊
အဓိက ထားရမည့်သူများမှာ အတွေးအခေါ် အယူအဆများကို ခုတမျိုး တော်ကြာတမျိုး အမြဲတစေ ပြောင်းလဲလွဲသော ကလေးသာသာ အတွေးရှိသော လူများ (Human Children) ကိုသာ ရည်ရွယ်ရမည်။
(စာရေးသူ– သူများပြောသည်ကို ယုံလွယ်ခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်)
နိူင်ငံရှိ လူအများစု၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာနှင့် အမြင်များ တွေးအခေါ် နှင့်
ပြုမူဆောင်ရွက်ချက်များသည် …. (Forgive me for editing to understand more easily)
တည်ကြည် စွာ အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့် စဉ်းစားချင်းထက် စိတ်ခံစားမှုကို ပို၍ အလေးပေးတတ်သော သဘောရှိသည်။
အဆိုပါ စိတ်ခံစားမှုများသည် ရှုပ်ထွေးနက်နဲမနေ၊ လွယ်ကူပြီး တသမတ်တည်းဖြစ်ကာ အချစ်၊အမုန်း၊အမှား၊ အမှန်၊ အမှန်တရားနှင့် ဖေါက်ပြန်မှုစသည့် ကွဲပြားခြားနားရန် မခက်ခဲသော အမြင်များသာ ဖြစ်သည်။
ထို့အတွက် ၀ါဒဖြန့်ချီသူများအနေဖြင့် မိမိ ဦးတည်သည့် အကြောင်းအရာအား ဓမ္မဌိထန်ကျကျ ဘက်နှစ်ဖက် သုံးသပ်ရန် မလို၊ ဤသို့ပြုလုပ်က အခြားတဘက်ကို အထောက်အကူပြုရာ ရောက်နိူင်ပေသည်။ သီအိုရီများ စည်းမျဉ်းများကို ကိုးကား၍ မိမိအတွက် အကျိုးရှိမည့် ဘက်ကိုသာ အမှန်တရားအဖြစ် တင်ပြနိူင်စွမ်းရှိရမည်။
လူထု လူတန်းစား အလွှာအသီးသီးမှ လူအများ၏ ခံယူနိူင်မှုသည် အကန့်အသတ်သာရှိပြီး အားပျော့တတ်သည့် အသွင်ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အလွယ်တကူ မေလျော့သွားနိူင်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ၀ါဒဖြန့်သူများအနေဖြင့် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အချက်အလက်များကို တတ်နိူင်သမျှ ကျစ်လစ်၍ ပုံစံခွက်ထဲထည့်သွင်းကာ အဆက်မပြတ် ထပ်တလဲလဲ ပြောဆိုခြင်းဖြင့် အားလုံးမကျန် မိမိပြောလိုသည်ကို နားလည်လာကြပေမည်။
အဆိုပါ မိန်းကမ့် ပါ ၀ါဒဖြန့်ချီရေး လမ်းညွှန်ချက်များကို အသုံးပြု၍ ဂျူးဆန့်ကျင်ရေး ဥပဒေများ၊ နုရင်ဘတ် ဥပဒေ ဟု အမည်တွင်သည့် အာရန် (Aryan) မဟုတ်သူများ နှင့် ဂျူး၊ ဂျစ်ပစီ၊ လူမည်များ ထိမ်းမြားခြင်းကို တားမြစ်သည့် ဥပဒေများ၊ မစွမ်းမသန်သူများအား ကိစ္စတုံး စီရင်သည့် အစီအစဉ် (T-4 Euthanansia) ၊ နှင့် ဗာဆိုင်းစာချုပ်အပေါ် အပြစ်ပုံချဝါဒဖြန့်ခြင်း အစရှိသည်တို့ကို အောင်မြင်စွာ ပြုလုပ်နိူင်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင် Sturmabteilung (SA) ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ယင်းသည် ဟစ်တလာ အာဏာရရှိလာရေးအတွက် များစွာအထောက်အကူ ပြုခဲ့သည့် မုန်တိုင်းတပ်( ရှပ်ညို)ဟု နောက်ပိုင်းတွင် လူသိများလာခဲ့သည်။ ၎င်းအား ပြည်သူ့လက်ရုံးတပ်ဖွဲ့များအသွင် ဖွဲ့စည်းပြီး အဓိကတာဝန်မှာ နာဇီလူထုအခမ်းအနားများတွင် လုံခြုံရေးယူရန် နှင့် အတိုက်အခံတို့၏ လူထု စုဝေးမှုများကို ဖျက်ဆီး ချေမှုန်းရန် ဖြစ်သည်။
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်းက ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာရှိ တိုက်ပွဲသတင်းများ၊ ရှုံးနိမ့်မှုများကို သရော်သည့်အကြောင်းများ၊ ကျဆုံးသွားသော ဂျာမာန်စစ်သားများအား အမိမြေအတွက် အသက်ပေးခဲ့သော သူရဲကောင်းများ အဖြစ် ချီးကျူးဂုဏ်ပြုမှုများကို ရေဒီယိုမှ နေ့စဉ်နီးပါး အထက်ပါ နည်းလမ်းများကို သုံး၍ ထုတ်လွှင့်ခဲ့ကြသည်။
Ko Ko Gyi >>>
Yes, good. Please add or write again of the Fascism practiced by Hitler’s Nazi Germany and Mussolini of Italy is SIMILAR to U Thein Sein’s Myanmar Military Government and 969 Ma Ba Thas…May be ဗမာအစိုးရ။ရခိုင်။မဘသတို့သွားနေသည့်ဖက်စစ် ဝါဒ OR ဖက်စစ် စနစ် @ Fascism (/fæʃɪzəm/) isaform of radical authoritarian nationalism. Fascism borrowed theories and terminology from socialism but replaced socialism’s focus on class conflict withafocus on conflict between nations and races. Fascists advocateamixed economy.
Nationalism is the main foundation of fascism. The fascist view ofanation is ofasingle organic entity which binds people together by their ancestry and isanatural unifying force of people. Fascism seeks to solve economic, political, and social problems by achievingamillenarian national rebirth, exalting the nation or race above all else, and promoting cults of unity, strength and purity.
Fascism promotes the establishment ofatotalitarian state. The Doctrine of Fascism states, “The Fascist conception of the State is all-embracing; outside of it no human or spiritual values can exist, much less have value. Thus understood, Fascism is totalitarian, and the Fascist State—a synthesis andaunit inclusive of all values—interprets, develops, and potentiates the whole life ofapeople.
Fascism emphasizes direct action, including supporting the legitimacy of political violence, asacore part of its politics. Fascism views violent action asanecessity in politics that fascism identifies as being an “endless struggle”.
The basis of fascism’s support of violent action in politics is connected to social Darwinism. Fascist movements have commonly held social Darwinist views of nations, races, and societies. They say that nations and races must purge themselves of socially and biologically weak or degenerate people, while simultaneously promoting the creation of strong people, in order to survive inaworld defined by perpetual national and racial conflict. READ ALL HERE @ https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism#Nationalism
This entry was posted on March 7, 2015 at 10:53 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
2 Responses to “ဗမာအစိုးရ။ရခိုင်။မဘသတို့သွားနေသည့်ဖက်စစ် စနစ် နာဇီဝါဒ”
drkokogyi Says:	March 7, 2015 at 11:16 am | Reply Melvin Moe
ကျောင်းသား တွေ ကို ဖမ်းစေချင် နေကြတဲ့ လူတွေ ထဲမှာ တပ်က အထုတ်ခံထားရတဲ့ သူတွေ အများဆုံးဗျ (တပ်ထဲမှာ တုန်းက မရခဲ့တဲ့ အခွင့်အရေးမျိုးတွေ ရနေတော့လဲ ခွက်ပျောက်မှာ ကြောက်နေတာပါဘဲ)
၉၆ တုန်းက ကျောင်းသားဆန္ဒပြမှုမှာပါဝင်ခဲ့ လို့ အဖမ်းခံခဲ့ရပြီး စစ်ကြောရေးမှာ ပါး ၂ ချက်လောက် ပိတ်ရိုက်လိုက်လို့ ထောက်လှမ်းရေးသတင်းပေး ဖြစ်သွားတဲ့ ပါတီဥက္ကဌ ငကြောက် ကလဲ ကျောင်းသားတွေ ကို ဖမ်းစေချင်တယ်
ဘာသာရေးအမုန်းတရား တွေ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဟောခွင့်ရနေပြီး ထောက်ပံ့မှုတွေ ရ ဇိမ်ကျနေတဲ့ စစ်ဘုန်းကြီး အချို့ က လဲ ကျောင်းသားတွေ ကို နစ်နာစေချင်ကြရှာတယ်
စာမတတ် ပေမတတ် ရပ်ကွက်ဥက္ကဌ ဖြစ်နေတဲ့ စွမ်းအားရှင်တွေ က လဲ ခွက်ပျောက်မှာကြောက်လို့ တာဝန် လက်ပတ်ပတ်ပြီး ကလေကချေ စွမ်းအားရှင်လက်သစ်တွေကို စုဆောင်းနေကြတာပေါ့
တကယ်တော့ မြန်မာပြည် တိုးတက်ချင်ရင် လွယ်လွယ်လေးဗျ
အရပ်ဖက်ပြောင်းပြီး လေကျယ်နေတဲ့ ဗိုလ်ပြုတ်တွေ ကို ယခင်လစာ အတိုင်းခံစားခွင့်ပေး တပ်ထဲပြန်သွင်းပြီး ရှေ့တန်းပို့ လိုက်ပါ
ထောက်လှမ်းရေး သတင်းပေး ပါတီ ဥက္ကဌ ငကြောက် ကို ပါး ၂ ချက်လောက် ခေါ် ရိုက်လိုက်ပါ
စာမတတ်ပေမတတ် ရပ်ကွက် ဥက္ကဌ ဆိုသူတွေကို ပေါ်တာထမ်းခိုင်း လိုက်ပါ
စွမ်းအားရှင်လက်သစ် ထောင်ထွက် ဂျပိုး သူခိုး တွေ ကို ထောင်ထဲပြန်ထည့် လိုက်ပါ
စစ်ဘုန်းကြီး တွေ ကို အရပ်ဝတ်ပြန်ဝတ်ပေးပြီး တပ်ထဲ ပြန်ခေါ်ထားလိုက်ပါ (ဖွဲ့စည်းပုံ မပြည့်တဲ့ တပ်တွေအတွက် အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်)
၄၃၆ ပြင် လိုက် ပါ
တိုင်းပြည် ချက်ချင်း ဦးမော့လာမယ်
drkokogyi Says:	March 8, 2015 at 8:57 am | Reply D Myo Chit – ဒီ မျိုး ချစ်
နေမျိုးဝေတို့လို အမျိုးသားရေးအယောင်ဆောင် အကြမ်းဖက်သမားတွေကို …
ဘယ်လောက်ပဲ ဥပဒေချိုးဖောက်ဖောက် …
အရေးမယူပဲ လွတ်ထားတဲ့ ရွေး/ကော်၊ အစိုးရ
ကြားနာပွဲထဲ ပင့်ဖိတ်ပြီး အပုဎ်ချခိုင်းတဲ့ လွှတ်တော်
ခင်ဗျားတို့ ဟာ ပြည်သူက ကြည်ညိုဖို့ မကောင်းအောင်
ခင်ဗျားတို့ သိက္ခာ၊ ခင်ဗျားတို့ ဂုဏ်ကို
ခင်ဗျားတို့ဟာ အကြမ်းဖက်အားပေးတွေ ဆိုတာ ပြသနေတာပဲ
ကုလားဆိုလဲ … ချပစ်လိုက် ချပစ်လိုက်
ဒီချုပ်ဆိုလဲ ….ချပစ်လိုက် ချပစ်လိုက်
တိုင်းရင်းသား ဆိုလဲ ….ချပစ်လိုက် ချပစ်လိုက်
၈၈ ဆိုလဲ …..ချပစ်လိုက် ချပစ်လိုက်
အလုပ်သမားဆိုလဲ …..ချပစ်လိုက် ချပစ်လိုက်
လယ်သမားဆိုလဲ …..ချပစ်လိုက် ချပစ်လိုက်
ကျောင်းသား …..ဆိုလဲ ချပစ်လိုက် ချပစ်လိုက် …တဲ့
ခင်ဗျားတို့ အဆင့်ဟာ လိုင်စင်ရ လူမိုက်ဂိုဏ်း ဖြစ်နေပြီ